Obi dị m ụtọ, netwọk mgbasa ozi na-aza. Echere na a ga-emefu $ 160 ijeri n'ụwa niile na mgbasa ozi dijitalụ na afọ a, ka Nnyocha Nyocha. Nyiwe dika 33Aga na-atụ anya ịhazi otu ndị ahịa na-emekọrịta na mgbasa ozi n'ịntanetị maka itinyekwu aka karịa itinye uche na usoro nlele anya. Ndị na-akpọsa ngwa ahịa na CMO kwesịrị ịdị na-akwado ROI site na mgbasa ozi n'ịntanetị ha. Kpụrụ ọrụ ụlọ ọrụ dịka Media Ratings Council (MRC), setịpụla ebe mmanya dị ala mgbe ọ bịara ịchọpụta ma e lere mgbasa ozi anya enwere ike ịhụ ya.